Marika famantarana 10 an'ny olona mangidy (+ fomba fitantanana iray) - Blog
Marika famantarana 10 an'ny olona mangidy (+ fomba fitantanana iray)
Indraindray, ny olona omena voasarimakirana dia tsy manao voasarimakirana.
Izy ireo na tsy liana amin'ny famadihana ny tanana marikivy izay nitondrana azy ireo ho lasa mamy kokoa, na efa nitoraka azy ireo loatra ka tsy nahita fomba hanaovana izany.
Na dia misy olona manandrana mijery ny firakotra volafotsy aza, dia mety hamely azy ireo ny fiainana ka sarotra be ny tsy hiafara amin'ny farany, indrindra raha tsy izy ireo manokana olona be fanantenana atomboka amin'ny.
Ny olona mangidy dia mitana lolompo, saro-piaro matetika, ary amin'ny ankapobeny dia mifantoka amin'ny lafiny maizin'ny fiainana.
Na ny olona iray manana izany rehetra izany aza - ny asa, ny filaminana, ny fianakaviana, ny mpiara-miasa, ny namana, ny vola ary ny fialantsasatra lava - dia mety hiafara amin'ny fahatsapana ho mangidy ihany.
Rahona misakana anao tsy ho mankasitraka ny zavatra rehetra anananao .
Ny olona mahatsapa ho mangidy dia tsy ny olona mora foana hatrehana. Mety ho orinasa tsy mahafinaritra izy ireo ary ny fiarahana amin'izy ireo dia mety hahatonga anao hahatsapa ho ratsy ihany koa. Raha avelanao izy ireo dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fiainanao izy ireo.
Mampalahelo fa tsy dia betsaka ny azonao atao hanampiana olona mangidy. Izy ireo ihany no afaka manampy ny tenany.
Zava-dehibe ny fahaizana mamantatra olona mangidy rehefa sendra olona iray ianao, na izany aza, mba hahafahanao mametraka ny mpiambina anao amin'ny vokany mety haterak'izany aminao.
Ireto misy famantarana vitsivitsy hotadiavina.
1. Izy ireo dia manao jeneraly
Ny olona mangidy sy jaded amin'ny ankapobeny dia vokatry ny traikefa iray na maromaro.
Na izany aza, matetika izy ireo dia tsy tezitra amin'ilay olona nanisy ratsy azy ireo fotsiny, fa vondron'olona iray manontolo.
aza mahay mifalifaly
Mety hahatsapa fahatezerana amin'ny lehilahy rehetra, ny vehivavy rehetra, ny mpikambana rehetra amin'ny asa iray manokana izy ireo, na koa angamba ny foko iray, noho ny zavatra niainany tamin'ny olona iray fotsiny.
Na, mety hieritreritra fotsiny izy ireo fa ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy maka azy ireo.
Matetika izy ireo dia hanao fanambarana manazava izay mampiseho fa efa mitsara olona na toe-javatra tsy manelingelina manandrana mahatakatra ny toe-javatra.
maninona aho no mangatsiaka fo
2. Mitana lolompo izy ireo
Tezitra isika rehetra indraindray, fa ny tsy fifankahazoan-kevitra sy ny tohan-kevitra dia nesorina ary hadino.
Na dia tsy mahita mifanatri-maso aza ny olona roa dia takatr'izy ireo fa tsy misy dikany ny fandaniany ny heriny amin'ny fitana lolompo.
Ireo izay mangidy anefa dia hahita fa sarotra be izany avelao handeha ny zavatra , na dia efa hadinon'ny olon-drehetra aza izany.
3. Tian'izy ireo ny feon'ny feony
Ny lohahevitra resaky ny olona mangidy dia mety ho zavatra nanjo azy ireo.
Amin'ny ankapobeny izy ireo dia tsy hametraka fanontaniana momba ny fiainanao sy ny zavatra mitranga aminao. Te hitaraina aminao fotsiny izy ireo momba izay nolazain'ny olona taminy, zavatra nitranga tamin'izy ireo, na ny fanjakan'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny ary ny fiantraikany ratsy teo amin'izy ireo.
4. Saro-piaro izy ireo
Raha tokony ho faly ho an'ny namana na mpiara-miasa rehefa mahazo fisondrotana na rehefa misy zavatra mandeha tsara amin'ny fiainany dia saro-piaro fotsiny izy ireo fa tsy mandeha tsara aminy ny raharaha.
5. Nefa tsy miova izy ireo
Mihevitra izy ireo fa tokony ho izy ireo no mahazo ny fampiroboroboana na mirotsaka an-tsehatra, saingy tsy mandray fepetra hanovana zavatra hanampiana azy ireo ho tonga any izy ireo. Mijanona eo amin'izay misy azy ireo mihitsy izy ireo, manontany tena hoe maninona no tsy latsaka ao am-pofoany ny raharaha.
Ahoana ny fomba hiatrehana olona tsy manam-pahaizana
Famantarana famantarana 15 izay atrehinao amin'ny olona marivo
Fomba 5 mampiharihary ny tenany ny fomba fahatsapana
6. Mitady fiheverana izy ireo
Ny olona mangidy dia mety tsy hangina momba ny zavatra tsapany. Rehefa tsapan'izy ireo fa ny fiainana dia mitsabo azy ireo amin'ny tsy rariny , Tian'izy ireo ny fiaraha-miory sy manome toky fa ny zavatra tsapan'izy ireo dia voamarina, satria lalina lalina dia fantatr'izy ireo fa tsy izany.
7. Miezaka ny handray torohevitra izy ireo
Raha tia mitaraina izy ireo, raha manandrana manome torohevitra mahasoa ny namana iray izay tena miahy azy ireo dia mandeha miaro haingana izy ireo.
Jamba izy ireo amin'ireo olona eo amin'ny fiainany izay miahy azy ireo, mifantoka amin'ireo izay tsapany fa mitady azy ireo.
8. Tsy tian'izy ireo ny olona falifaly
Ny manodidina ny olona falifaly sy be fanantenana dia manipy ny fitondran-tenany amin'ny fanamaivanana maranitra, midika izany fa miatrika ny toe-tsainy ratsy izy ireo fa tsy zavatra tian'izy ireo atrehana. Ka manjary misoroka fotsiny olona falifaly voajanahary .
Midika izany fa manomboka lasa manohitra ny fiaraha-monina izy ireo, ary aleony mandany ny takarivan'ny mason'izy ireo noho ny antony manohitra an'izao tontolo izao toy izay miala voly amin'ny fiaraha-monina sy manao ny faran'ny fiainana.
9. Tsy miarahaba ny hafa mihitsy izy ireo
Ny fialonany dia midika fa sarotra amin'izy ireo ny miarahaba ny hafa amin'ny fahaizany na zava-bitany. Tsy henonao mihitsy ny nilazan'izy ireo ny teny hoe 'tsara', ary tsy nanonofinofy hanome zon-tanan'olona izy ireo.
10. Mifosa izy ireo
Tian'izy ireo ny mampiely tantara henony momba ny zavatra tsy nety nataon'ny olon-kafa. Izy ireo no olona ho hitanao ao amin'ny cooler rano na amin'ny fidinan'ny trano fisotroana manaparitaka izany resaka fifosana mangatsiaka henony momba ny mpiara-miasa izany.
Ahoana no hikarakarana olona mangidy
Fantatrao ve izany? Mazava fa izay olona manisy tsikombakomba ireo boaty rehetra ireo dia tsy olona tsara hananana amin'ny fiainanao, ary raha tsy azonao sorohina dia mila mitady fomba itantanana izany ianao.
Raha olom-pantatra na mpiara-miasa izy ireo:
1. Aza matoky azy ireo.
Tsy karazan'olona tokony hizaranao fampahalalana saro-pady izany. Raha manao izany ianao, dia mety ho lasa resadresa-be any amin'ny birao, ary mety tsy hahazo ilay fiheverana miahy antenainao.
2. Aza lasa sorony hitomany.
Hikaroka olona hitaraina izy ireo, noho izany mila ataonao mazava tsara fa tsy anisan'izy ireo izy. Raha miharihary hatrany amin'ny fihenan-dry zareo ianao dia tsy maintsy hahatsapa ho ratsy. Areti-mifindra ny mangidy, ka miarova tena.
3. Aza masiaka, fa aza manaiky.
Rehefa milaza ny heviny ny olona iray, dia mety ho mora be indraindray ny miondrika sy manaiky ny zavatra lazainy fotsiny. Raha misy olona mangidy mandroatra zavatra tsy ekenao, manandrama hisoroka an'io.
Fantatray fa mora kokoa ny miondrika fotsiny ny lohanao, ary tsy misy antony tokony hidiran'ny adihevitra momba izany, fa ataovy mazava tsara fa tsy mizara ny hevitr'izy ireo ianao.
Raha olona akaiky anao izy ireo:
1. Resaho amin'izy ireo izany.
Ireo teboka telo etsy ambony dia tsara sy tsara avokoa raha olom-pantatra na mpiara-miasa ilay olona jaded no ifandaharanao, fa raha namana akaiky , mpikambana iray ao amin'ny fianakavianao, na mpiara-miasa aminao, mety tsy ho azonao atao izany.
Miezaha mitady ny herim-po hipetrahana ary hiresadresaka amin'izy ireo momba izany sy ny fomba ahafahany mandroso.
ahoana no ahafantaranao raha misy olona manadala anao
Aza manantena azy ireo handray tsara izany na hamaha zavatra isaky ny mandeha, fa raha ny fitiavana sy ny fahaiza-mandanjalanja no itondranao ny toe-javatra dia mety ho afaka mametraka chink ao anaty fiadian'izy ireo ianao.
Ataovy mazava tsara fa azonao ny fanaintainan'izy ireo ary eo ho azy ireo ianao, ary ny tena mahasoa azy ireo ihany no tadiavinao, satria ny fiainana mangidy dia tsy mahafinaritra velively.
Mety tsy tsapany akory fa nivadika mangidy izy ireo.
Miaraka amin'ny fitiavan-tena kely sy fitiavana bebe kokoa avy amin'ny hafa, izy ireo hery ahodino fotsiny ny raharaha.
Ahoana no fomba hanome azy toerana
ahoana no hahasambatra tokana aorian'ny fisarahana
ahoana no ahafantarana raha misy fiarahana miandany amin'ny finamanana
ny fomba hiatrehana ny ratsy tarehy
iza no vadin'i mickie james
ahoana no hilazana raha tsara bika ianao